Best 150kW Ilaa 500kW Low Low Generator Sale Badeecada Qalabka Buufiyeyaasha Ee Low
24kw-160kw Motor Generator
Jiilaalka Lovol ayaa dhigay wuxuu ka kooban yahay baabuurta laydhka nalalka Lovol iyo koronto-dhaliyaha Stamford, koronto-dhaliyaha Leroy ama koronto-farsameed FMW leh Deepsea, ComAp ama Controlgen generator modules. Awoodda Awoodda: 24kw ilaa 160kw Labadaba Shirkadda Furan ee Furaha iyo Kaararka Nooca Caleenta
184 Qalabka Calaamadaha Iskudhicelka "AC"
(12kw-41kw) FMW beddel-rogaaliye la'aan ee soo saariddan xaddiga si toos ah ayaa loogu talagalay loona soo saaray si loo helo jeneraalka asalka ah ee Stamford AC PI144 taxane ah oo ay ku jiraan shuruudaha farsamada, mid waliba iyo mid kasta, iyo naqshada muuqaalka.
Generator-ga Qalabka yar 150kw ilaa 500kw oo awoodda FMW waa mid dhexdhexaad ah koronto-dhaliyeyaasha aamusan awood u leh 6 silylers ama yar yar oo ciriiri * istaroogga 8 iyo 12 silsilad koronto-dhaliyaha mashiinka loo dhisay wershad yar ama a dhismo dhexdhexaad ah sida isbitaalada, hudheelada, tuulooyinka yaryar iyo wixii la mid ah.
1. Silent Diesel Generator (150kw-500kw)
2. Baaxadda Aaladda Jirka
Cusub Ricardo, Lijia, iyo Stire taxane mishiinka
Original Stamford, Leroy Somer iyo Mecc Alte beddeliye
Brand-cusub Brushless MCA beddelaha (H "H, IP23, AVR)
Is-beddelka Is-beddelka Is-beddelka (A.T.S) nidaamka xakamaynta
Saldhig adag oo saldhig adag ah shaxanka leh 8 saacadood oo shidaalka gaaska ah
Maaraynta nidaamka xakamaynta koronto-dhaliye
2MM-4MM steel dusha sare ee loo yaqaan "generator"
Taangada shidaalka ee macaamiisha ah oo ka weyn 8 saac oo soconaya
Badbaadiyaha ilaaliyaha amniga oo leh shabakad ilaalin ah
50 shaqo culus ℃ Radiator dhoobo
Cadaadis culus ka-horjoogaha ka-horjoogsan
Deepsea7320, Smartgen6110 ama Generator AMF25 xakameyn
Warshadaha culus ee culus qor noocii aamusnaanta leh afka dabacsanaan leh
Kuleyliyaha biyaha / kuleylka saliidda-qaboojiyaha ee cimilada aad u qabow
Heerka sare ee gobolka waxqabadka aan fiicnayn
Electronics sida ABB, Schneider iyo Siemens
Deepsea6020, Smartgen420 ama ComAp MRS11 kontoroolka korantada
Ciriiri weyn oo cufan leh oo cufan leh isbuunyo
Saliid yar cadaadiska, kulaylka, culeyska, iyo ilaalinta dheeraadka ah
Qaybo gaar ah sida furaha aan la saarin farsamooyinka birta, mashiinka godka saliida, boodhka boodh iwm.
Qalabka elektarooniga ah ee gobolka sida kabaha, jajabiyaha wareega, riix, nalalka, qalabka, joojinta qalabka.
Mishiin dheeraad ah iyo beddelaadaha beddelka ah sida filtarrada, gaaska, mishiinka, AVR, hagaajiye.
Xirmada qalabka leh ee hawlgalka buugyada korantada, engine, iyo alternator
Qalabka xirmada qalabka gawaarida oo leh noocyo qalab ee dayactirka.
3. Qiyaasta iyo Shahaadada
4. Faa'idaada Jeneraalkayaga
① Qalabka Heerka sare iyo taariiqda.
● Dhalada, rinjiga, qulqulka dhawaaqa, fiilooyinka, gariirka-nuugista, riix, AVR, diode, muraayadaha, mashiinka, mashiinka dhagaxa, saxanka birta, mitirada, kontoroolayaasha, batteriga, AMF, ATS iyo wixii la mid ah.
② Kooxda cilmi-baarista iyo horumarinta ee tacliinta sare leh
● Iyadoo koox cilmi-xirfadeed iyo horumarineed oo xirfad leh, kaliya ma awoodi karaan FMW awooda wax soo saarka tayada wax-ku-oolka ah ee la isku halleyn karo, laakiin sidoo kale awoodda FMW waxay samayn kartaa noocyo kala duwan oo ah gensetada sida koronto-dhaliye, quwadda korontada, koronto-dhaliye sida waafaqsan baahida gaarka ah ee macaamilka.
③ Waxqabadka la isku halleyn karo iyo Qiyaasta
● Qalabka hawo-dhaadheer oo bilaash ah (95-105)% Un
● Heerka xakamaynta qalabka joogtada ah ee gobolka _ ± 1.0%
● Heerka qaangaadhka awood--dirista-fogaanshaha% + 20% / - 15%
● Waqtiga soo-kabashada ee Voltage1.0S
● Heerka isbeddelka isbeddelka boqolkiiba ± 0.5%
● Saamaynta xoogsaaridda qabow / kulaylka = 2%
Xaqiijinta Heerka / Xawaaraha:
● Beddel xawaaraha laga bilaabo 0-100%, Heerka Kala-baxa / Iskudhafka Heerka 5%.
● Ka kaco 25-100%, wixii kastoo xaddidan Joogtaynta Joogtada / Xawaaraha Sicirka 0.25%
Xaaladda Saameynta Telecom:
● TIF (MA MG1-22) ka wanaagsan 50 sano
● THF (BS EN60034) ka khayr badan 2%
● Nidaamka Xakamaynta Tayada ee ISO9001: 2008
● Insulinta Cadaadiska Baaritaanka sida waafaqsan GB5226.1-2002-19.3
● U adkeysiga-Voltage Baaritaanka sida waafaqsan GB7 55-2000-8.1 (oo leh 1500V ilaa 60S)
● Dhammaan qaybaha korontada ayaa lagu baaray sida waafaqsan oo leh GB5226.1-2002-19.6
● Ammaanka Maqalka waxaa lagu baaray sida waafaqsan oo leh GB / T820.8-2002-6.3
● Dab-damiinka la baaray sida waafaqsan GB / T2820.8-20 02-6.4 / 6.5
● Dhammaan qalabka korontada ayaa si adag loo kormeera 25%, 50%, 75%, 100% iyo 110% Load.
dejinta aamusnaanta Aamusnaanta naaftada aamusnaanta mashiinka naaftada ah dejinta qalabka gurmadka ee aamusan aamusnaan mashiinka tamarta nalalka ah 500kva oo ah aaladda aamusnaanta
Hore : 8kW Si aad 150kW ugu yaraanta Qalinka Korontada
Xiga : 500kW ilaa 800kW Low Low Generator
Mawduuca : 150kW ilaa 500kW Low Low Generator
3kW ilaa 6kW Dareemo Buuxa Qalinka
Generator-ga Qalabka yar inta u dhaxaysa 3kw ilaa 6kw waa kuwa ugu caansan aamusnaanta naqshadeeynta tamarta .
500kW ilaa 800kW Low Low Generator
Generator-ga Qalabka yar inta u dhaxaysa 500kw illaa 800kw waa mid weyn aamusnaanta naqshadeeynta tamarta.
800kW ilaa 1500kW Low Low Generator
Generator-ga Qalabka yar inta u dhaxaysa 800kw ilaa 1500kw waa gigantigga weyn aamusnaanta naqshadeeynta tamarta.
50kw-660kw Doosan Motor Generator
Doosan qalabka korontada wuxuu ka kooban yahay Kubota tamarta naaftada ah iyo Stamford koronto-dhaliye, koronto-dhaliye Leroy ama koronto-dhaliye FMW oo leh Deepsea, ComAp ama Module kontoroolka Smartgen. Awoodda Awoodda: 50kw ilaa 660kw Labadaba Shirkadda Furan ee Furaha iyo Kaararka Nooca Caleenta
Awoodda FMW waxay bixisaa noocyo of qalabka wax lagu dhejiyo iyo qalabka wax soo saarka korantada.